Procreate dia havaozina miaraka amin'ny fitaovana lahatsoratra vaovao ho an'ny iPad | Famoronana an-tserasera
Farany tonga ny fitaovana an-tsoratra ho Procreate ho an'ny iPad anao
Procreate dia namoaka fanavaozam-baovao miaraka amin'ny fitaovana an-tsoratra izay hahafahanao manadino ny Photoshop sy ny programa hafa hanampiana ireo fanambarana manaitra ireo amin'ny sary nataonao ho an'ny tambajotra sosialinao.
Ity fampiharana ity izay miaina ao amin'ny fivarotana fampiharana ho an'ny iPad, dia iray amin'ireo malaza indrindra ary manana fanampiny izay tsy lafo. Fitaovana ho an'ny mpamorona izay fantatsika tato ho ato fa ho avy ity fitaovana vaovao ity.
Miresaka momba izany isika iray amin'ireo fampiharana be mpividy indrindra amin'ny iPad mba hampisehoana ary ianao izao dia mila manome fitaovana vaovao ho an'ny lahatsoratra. Ankehitriny miaraka amin'ny fitaovan'ny lahatsoratra tsy mila mampiasa fitaovan'ny antoko fahatelo izahay, toy ny Photoshop na ny hafa, hamoronana ireo singa mana-tsoratra ao amin'ny Procreate.
Ho hitantsika ny kisary vaovao fa rehefa tsindriana dia ahafahantsika manampy lahatsoratra mba hanombohana mamorona ny hafatray. Fitaovana vaovao miasa tena tsara ary mifanaraka tsara amin'ireo andiana fitaovana iorenanan'ity rindrambaiko natokana ho an'ny iPad ity ity.
Rindrambaiko efa niasa avy amin'ny matihanina amin'ny famolavolana sy ny amateurs izay mitady an'io famoronana io avy amin'ny iPad-n'izy ireo fotsiny mba hamoronana sary kalitao miaraka amina hafatra manaitra sy mahasarika, na ny farany na ny tanjona tadiavina.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny Procreate ahitana ny endritsoratra iOS mahazatra sy inona ireo fanampiny telo toy ny plus plus lehibe. Tahaka ny ahafahanao manafatra endrika amam-bika samihafa ary apetraka amin'ny toerana tena izy noho ny fahafahanao mamindra azy ireo.
Ny tsara indrindra dia izany lahatsoratra noforonina tamin'ny endrika vector, mamela ny fanovana hatao mba hampitomboana ny habeny nefa tsy hahavery ny hamafiny. Ny kinova Procreate 4.3 izay mitondra fahaizana manondrana GIF mihetsika ihany koa. Raha mbola tsy nanandrana an'ity fampiharana ity ianao dia mamporisika anao hividy azy amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Farany tonga ny fitaovana an-tsoratra ho Procreate ho an'ny iPad anao